लौ अव सजिलो भयो, एक लाखभन्दा कम रकम डिपोजिट गर्दा परिचयपत्र नचाहिने !
ARCHIVE, POWER NEWS » लौ अव सजिलो भयो, एक लाखभन्दा कम रकम डिपोजिट गर्दा परिचयपत्र नचाहिने !
काठमाडौँ - एक रुपैयाँमात्र डिपोजिट गर्दा पनि परिचय पत्र चाहिने नियम आएपछी वाक्क भएका जनतालाई राहत हुने भएको छ । अब बैंकमा १ लाख वा सो भन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा मात्र परिचयपत्र देखाए हुने नियम आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै अबदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद जम्मा गर्ने (खातावाला बाहेक) सँग मात्र परिचयपत्र लिए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले क, ख, ग वर्गका वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन संशोधन गर्दै आइतबार पुनः यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनमा यस्तो उल्लेख छ :